Featured – စာမကျြနှာ6– Healthy Life Journal
———၊ ကိုထက် ၊——— တစ်ပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်ခန့် မှိုစားပေးခြင်းက အသက်အရွယ်အိုမင်းလာချိန်မှာ မှတ်ဥာဏ်ပုံမမှန်ဖြစ်နိုင်ခြေကို တစ်ဝက်လျော့ကျစေတယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။ လေ့လာသူတွေက မှိုဟင်းကို တစ်ပတ်အတွင်း အနေတော်ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးစာ နှစ်ကြိမ်ချက်ပြုတ်ပြီး စားပေးခြင်းဖြင့် ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အရွယ်အိုမင်းခြင်းကြောင့် မှတ်ဥာဏ်ပုံမမှန်ဖြစ်လာပါက သတိမေ့ခြင်း၊...
———၊ ကိုထက် ၊——— ကွမ်ဇူးမှ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ဇိုဂျန်အမည်ရှိ မိန်းကလေးဟာ တစ်လကျော်ကြာ အဆက်မပြတ် ၀မ်းဗိုက်နာကျင်မှုဝေဒနာကို ခံစားနေခဲ့ရတယ်လို့ ဖူဂျင်းသတင်းအရ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းစင်တာကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ “ အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့်...
ပူလွန်းသည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်စီးသည့် အမျိုးသားများ သုက်ပိုးထိခိုက်ပြီး မျိုးအောင်နိုင်စွမ်းကျစေနိုင်
———၊ ကိုထက် ၊——— အချိန်ကြာကြာ ဆိုင်ကယ်စီးပြီး ပူတဲ့ထိုင်ခုံပေါ် ထိုင်စီးရတဲ့ အမျိုးသားတွေက ဝှေးစေ့မှာ မကောင်းတဲ့ သက်ရောက်မှုဖြစ်စေပြီး သုက်ပိုးတွေရဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ အရည်အချင်းကို လျော့ကျစေပါတယ်။ အဲဒီနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ မျိုးအောင်နိုင်စွမ်း ထိခိုက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းအရောင်းကုမ္ပဏီရဲ့ ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်လုပ်သူ မစ္စနာဟိုအန်းက...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— အဘွားဒေါ်သောင်းကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၉၀၊ ၀ါဆိုလဆန်း ၃ ရက်နေ့၌ ရန်ကုန်၊ စမ်းချောင်းမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးချင်း ၁၂ ယောက်အနက် အငယ်ဆုံးသမီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “ အဘွားရဲ့ တခြားမောင်နှမတွေကတော့ ဆုံးသွားပါပြီ၊...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ယခုအခါ အသက် (၅၉) နှစ်အရွယ် ဒေါ်ခင်သန္တာလင်းသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လကစပြီး အစာလမ်းတွယ်ဆက် တစ်သျှူးကင်ဆာ ဝေဒနာ လက္ခဏာများကို စတင်ခံစားခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။ “ စစချင်း ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေ စဖြစ်လာသလဲဆိုတော့...
—–၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) ၊—– ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာ အတက်ရောဂါ ခံစားနေရသူ သန်းပေါင်း ၅၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ လူဦးရေ ၁၀၀ မှာ အတက်ရောဂါ ခံစားနေရသူ တစ်ယောက်နှုန်း ရှိပါတယ်။ လူဦးရေတစ်သိန်းမှာ တစ်နှစ်အတွင်း...
———၊ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ၊——— ကျွန်တော့်မှာ လက်တုန်တတ်တဲ့ အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်။ ၁၉ နှစ်သားလောက်မှာ စတင်သတိထားမိလာတယ်။ အခုဆိုရင် ကျွန်တော့်အသက်က ၂၉ နှစ်ပါ။ မိဘဆွေမျိုးတွေမှာလည်း ဒီလိုမရှိပါဘူး။ အရင်က ဘာမှမဖြစ်သလို အရေးမကြီးသလို နေခဲ့ပေမယ့် အခုဓာတ်ပုံရိုက်တော့ လက်ကတုန်နေတော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး...
—–၊ ပါမောက္ခဦးနေ၀င်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. အဆစ်ခိုင်တယ်၊ အဆစ်ကွေးတယ်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ ဆရာ။ A. အိပ်ရာထဲ အကြာကြီးနေနေရတဲ့ လူနာတွေ၊ အောက်ပိုင်းသေသွားတဲ့ လူနာတွေနဲ့ လေဖြတ်ထားတဲ့ လူနာတွေ . . သူတို့က...
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ခံစားခဲ့ရသည့် အူမကြီး ကင်ဆာအဆင့်-၃(stage 3c) ကို ကုသအောင်မြင်ထားသူ ဒေါ်အေးအေးသန့်က အလွန်အမင်းဝမ်းချုပ်ရာမှ စတင်သတိထားမိခဲ့ကြောင်း ရောဂါသိရှိခဲ့ပုံကို ယခုလို ပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့သည်။ “ဒီရောဂါဖြစ်တာကို သိတာက ၁၀-၂- ၂၀၁၆...